Heshiiska shuruudaha guurka - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Guurka > Heshiiska shuruudaha guurka
Heshiiska shuruudaha guurka (avioehtosopimus) wuxuu saamayn ku yeelanayaa, sida loo qaybsano hantida marka ay is furaan labo is-qabay ama ay dhimasho timaado. Haddii lamaanuhu aysan sameyn heshiiska shuruudda guurka, hantida labadoodu ay leeyihiin waa la isku darayaa kadibna si siman loogu qeybinayaa. Sida badan heshiiska shuruudaha guurku waxay qeexayaan, labada is-qabta midkoodna xaq uma lahan kan kale hantidiisa. Heshiiska shuruudaha guurka waxaa la samayn karaa guurka ka hor ama guurka inta lagu jiro dhexdiisa. Waxaana loo baahan yahay inay aqbalaan labada qof oo is-qabta.
Heshiiska shuruudaha guurka waxaa loo sameeyaa qoraal ahaan. Waxaa lagu qoraa taariikh waana la sixiixaa. Heshiiska shuruudaha guurka waxaa loo diraa xafiiska diiwaangelinta si loo diiwaangeliyo. Samaynta heshiiska waxaa habboon in loo isticmaalo sharci yaqaan khabiir ah.
Heshiiska shuruudaha guurku waa iskaa wax u qabso oo qasab ma ahan.
Sheshiiska shuudaha guurkaFinnish | Iswidish